Fanandramana tsara indrindra an-trano ho an'ny ankizy - Ikkaro
firosoana >> Fanandramana trano >> Fanandramana ho an'ny ankizy
Ao anatin'ny andrana an-trano dia voatery ny misy toerana manokana ho an'ireo antsoina hoe fanandramana any an-trano ho an'ny ankizy. Fanandramana tsotra izy ireo izay azon'ny ankizy atao samirery na miaraka amin'ny olon-dehibe ary namboarina mba hatao "ao an-trano", izany hoe, amin'ny fitaovana mora azo sy mora vidy.
Fanandramana tsotra sy famoronana, izay mazàna mamaly ny fananana ara-batana sasany ary mamela antsika tsy hanaitra ny ankizy sy ny tanora fotsiny, fa koa ny hanazava ny trangan-javatra ara-batana ao ambadik'ireo fanehoan-kevitra ireo.
Fa maninona no mitranga? Ary inona no hitranga raha tsy manao an'io fomba io aho? Sa raha manova ny akora / vokatra?
Mahaliana hatrany ny fanaraha-mason'ny olon-dehibe azy ireo ary tsy hiantohana ny fiarovana ny zaza fotsiny fa hitarika azy. Ampio izy hieritreritra, hametraka amin'ny tenany ny fanontaniana mety. Manampy anao hahita ny fampahalalana sy hampiasa ireo fitaovana misy anao.
Ary angamba ny zava-dehibe indrindra amin'ny rehetra hahafahanao manaitra ny fahaliananao amin'ny zavatra sy ny tontolo manodidina antsika. Famoronana, fahalianana te hahafanta-javatra, fianarana ary ezaka be.
Tiako foana io karazana andrana io saingy satria manan-janako bebe kokoa aho :)
Ny fahasarotana toy ny mahazatra dia ny fahalalana mizara ny atiny, fanandramana ary famoronana an-trano ho an'ny ankizy miaraka, ary ny famoronana kilalao?
Izany dia zavatra antenaintsika hamaha azy tsara. Heveriko fa manana fanasokajiana votoaty tsara izahay.
Ankafizo ary araraoty ny faran'ny herinandro handehananao hanao fanandramana avelanay anao miaraka amin'ny zanakao. Ary raha mpampianatra ianao dia aza misalasala mitondra azy ireo any an-dakilasy.
Ary rehefa manao zavatra ianao. Azafady mba lazao anay ary lazao anay ny fandehany.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia mamela fomba maro hamerenana tadio kely ao an-trano isika. Izy io dia misy ny famokarana tadio ao anaty ... Tohizo ny famakiana
Fomba fanaovana ranomainty tsy hita
Avelantsika fomba telo hanaovana ranomainty tsy hita maso ao an-trano sy mora.
Ny voalohany ary angamba ny be pitsiny indrindra dia ny fampidirana ny volon'ondry vy, izay esorinay amin'ireo mpitsikilo ranom-boasarimakirana ary avelao izy hiala sasatra eo anelanelan'ny 7 sy 15 andro.
Tinta tsy hita maso misy voasarimakirana
Fanandramana an-trano amin'ny ronono
Nahita ny tenako aho ahintsano aho miaraka amin'izany fanandramana an-trano maro loko sy tsotra, vita amin'ny:
Ilay atody mitoboka - fanandramana simia
Mahaliana, ny andrana alefany any amin'ny sekolin'ny zanako vavy izahay. Momba ny a fanandramana tsotra hatao amin'ireo zanatsikaHaiko ny mampiditra azy ireo amin'ny ny tontolon'ny siansa mahafinaritra, na dia miaraka amin'izany aza isika dia mety hitarika azy ireo.
MITOHITRA NY TALOHA
El zanak'olombelona Izy io dia voaforona fitambaran-javatra marobe izay manao asa manokana sy lehibe ho azy, ohatra, ny calcium dia manana fiasa (hamafin'ny taolana). Rehefa milentika taolana namboarina ary avelao izy mandritra ny andro maromaro, azonao atao ny mahita azy manalefaka ary mety miondrika na tapaka mihitsy amin'ny rantsan-tànanao. Izany dia satria izyasidra acetic (vinaingitra) vahaolana "mangalatra" mineraly avy amin'ny taolana amin'ny fanehoan-kevitra amin'izy ireo ary mamorona, ohatra, calcium acetate. Amin'izany fomba izany dia mihena ny habetsaky ny kalsioma, izay miteraka a fahosan'ny taolana tafahoatra.